Qaraxyo Lala Beegsaday Xeebta Liido Iyo Khasaaraha Ka Dhashay | Araweelo News Network (Archive) -
Qaraxyo Lala Beegsaday Xeebta Liido Iyo Khasaaraha Ka Dhashay
Muqdisho(ANN)Laba Qarax oo kala duwan ayaa Goor dhoweyd ka dhacay Baarka Indian Ocean Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho, kaas oo ka soo horjeeda Baar Liido oo ay dad badan u damaashaad iyo dabaal tagaan maalin walba gaar
ahaan maalinta Jimcaha.
Qaraxan ayaa loo adeegsaday Baabuur waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyey, iyadoo warar kale oo hordhac ahina sheegayaan in mid labaad oo qof ismiidaamin ah uu dhacay isla xilligaa.
qaraxan ayaa geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac, warar hordhac ah ayaa sheegayaan in 7 bqof ay ku dhaawacmeen qaraxa maqaaxida ka dhacay 3 kalane ay dhimasho noqdeen, balse ilaa hada si cad looma ogga inta uu leegyahay khasaaruhu, waxaana mariiba goobta hareereeyeen Ciidamada Dowladda.
Cabdullaahi Xasan Bariise oo katirsan saraakiisha Booliska dowladda Federaalka ayaa sheegay in hal qof ku dhintay qaraxa todoba qofna ku dhaawacmeen, wuxuuna dhacdadaa ku tilmaamay mid muujinaysa habacsanaan, isagoo ganacstada xeebta Liido ku eedeeyay in aanay la shaqeyn ciidanka amaanka.
lama garanyo cida ka danbaysay qaraxaa, balse xarakada Al-shabaab ayaa marar badan hanjabaad usoo jeedisay dadka temeshlaha u taga xeebtaa, iyagoo ku tilmaamay mid fawaaxish iyo fusuq ka socdo.